उपत्यकाको संक्रमण एक महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो, कहिले खुल्छ निषेधाज्ञा? :: Setopati
उपत्यकाको संक्रमण एक महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो, कहिले खुल्छ निषेधाज्ञा? कहिलेसम्ममा झर्ला संक्रमणदर १० प्रतिशत तल!
विवेक राई काठमाडौं, जेठ ३१
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो एक महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।
जेठको पहिलो साता दैनिक औसत २ हजार ७ सय जनालाई संक्रमण देखिएकोमा पछिल्लो एक सातायता औसत ९ सय १५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
संक्रमितको संख्या एक तिहाइले घट्न थालेपछि धेरैले असारदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुल्छ भनेर सोचेका थिए। कतिपय विज्ञहरूले समेत उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई असारदेखि खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने राय राखेका थिए।
तर हिजो (आइतबार) उपत्यकाका सिडिओको बसेको बठैकले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार निषेधाज्ञा आगामी असार ७ गतेसम्म जारी रहने छ। यद्यपि यसअघि बिहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न दिइएको खाद्यान्न पसललाई बिहान ११ बजेसम्म खोल्न दिइने भएको छ।
उपत्यकामा संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञालाई थप गरिएको सिडिओहरूको भनाइ छ। तर संक्रमणदर १० प्रतिशतमा झरे उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै लैजानु पर्नेमा सिडिओहरू सहमत छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि उपत्यकामा संक्रमणदर १० प्रतिशतमा झरे के-के कुरा खोल्दै लैजान सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'उपत्यकामा संक्रमणदर १० प्रतिशतमा झर्यो भने के-के गर्ने भनेर मन्त्रालयका टोलीहरूले काम गरिरहेको छ। यसबारे हामी छिट्टै टुंगो गर्छौं।'
पछिल्लो एक सातायता उपत्यकामा संक्रमणदर २२.७२ प्रतिशत छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक सातामा उपत्यकामा जम्मा २८ हजार २१० जनाको परीक्षण गरिएकोमा ६ हजार ४११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर संक्रमितको संख्यामा धेरै सुधार देखिए पनि त्यो अनुसार संक्रमणदरमा भने सुधार आएको देखिँदैन।
विज्ञहरूका अनुसार जति धेरै संक्रमणदर भयो त्यति नै समुदायमा संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ। जसले गर्दा परीक्षणलाई थप बढाउनुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो एक सातायता उपत्यकामा दैनिक औसत ४ हजार जनाको परीक्षण भएको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि परीक्षणलाई नबढाउने हो भने संक्रमण घटेको/नघटेको भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर पछिल्लो समय उपत्यकाका अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप घटेका कारण संक्रमण घट्दै गइरहेको यथार्थ चाहिँ हो। यसले गर्दा पनि धेरैलाई अब निषेधाज्ञा खुल्छ भन्ने लागेको हो।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निषेधाज्ञा कहिलेबाट खुल्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन। यद्यपि संक्रमण दर १० प्रतिशतमा झरे निषेधाज्ञालाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउँदै लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ।
त्यसैको लागि सुरूमा के-के कुरा खुलाउने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ। अर्को कुरा धेरैलाई निजी तथा सार्वजनिक यातायात कहिलेबाट खुल्छ भन्ने चासो छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार संक्रमणदर १० प्रतिशतमा झरे पनि यातायात सञ्चालनमा आउने सम्भावना निकै न्यून छ।
उनले संक्रमणदर १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेमात्र यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जनाए।
'संक्रमणदर पाँचदेखि १० प्रतिशतको बीचमा भयो भनेमात्र यातायात, विद्यालयदेखि भीडभाड हुने क्षेत्र खुलाउन सकिन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा भने उक्त क्षेत्र खुलाउन सम्भव छैन,' उनले भने।
पौडेलले उपत्यकामा अहिले पनि संक्रमणदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै तत्काल निषेधाज्ञा खुलाउन नसकिने बताए। यद्यपि यसरी नै संक्रमणदर सुधार हुँदै गएमा जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ। तर त्यसका लागि दुई तीनवटा कुरालाई आधार मानेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
'निषेधाज्ञालाई खुलाउनपूर्व दुई तिन वटा कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका हेर्नुपर्यो। त्यसपछि हाम्रो अस्पतालहरूको बेडको अवस्था र सघन उपचार सेवाको हालको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ। सक्रिय संक्रमित र संक्रमणदर कति छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ,' पौडेलले भने, 'त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सबै कुरा खोल्नु हुँदैन भनेरै सिसिएमसी र डिसिसिएमसीलाई सिफारिस गरेका हौं।'
तर संक्रमणदर कहिले १० प्रतिशतमा झर्छ भनेर मन्त्रालयले नै भन्न सकेको छैन। त्यसैले गर्दा संक्रमितको संख्यामा एक तिहाइले कमी आउँदा पनि सरकारलाई निषेधाज्ञा खुलाउने निर्णय गर्न गाह्रो भएको हो।
कतिपयले यसअघि पहिलो लहरमा दैनिक ५ हजार बढी सक्रिय संक्रमित थपिँदा पनि लकडाउन खुलाइएको भन्दै अहिले दैनिक संक्रमित त्यो भन्दा कम देखिएकाले निषेधाज्ञा खुलाउन सकिने तर्क गरेका छन्। तर प्रवक्ता पौडेलले अहिलेको भेरियन्ट अघिल्लो भेरियन्टभन्दा धेरै घातक रहेको भन्दै पहिल्यैको जस्तो ढाँचामा निषेधाज्ञा खुलाउन नमिल्ने बताए।
साथै, निषेधाज्ञा खुलाउने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकल क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै पौडलले भने, 'सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेर मात्र हुँदैन। अस्तिकै कुरा गर्दा पनि हामीले चाहेर पनि विद्यालय बन्द गर्न सकिएन।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३१, २०७८, १६:०५:००